Izindaba - Iyini inzwa ye-axis eyisishiyagalolunye futhi yenzani
Inzwa iyithuluzi elibonayo elikwazi ukuzwa ulwazi olulinganiswayo, futhi lingaguqula ulwazi lube amasignali kagesi ngokuya ngemithetho ethile yokudlulisa, ukucubungula, ukugcinwa, ukubonisa, nokuqoshwa.Kunezinhlobo eziningi zezinzwa, njengezinzwa zomsindo (izibani ezivamile ezisebenza ngezwi), izinzwa zokushisa (amaketela kagesi), njll., ezisetshenziswa kakhulu emikhiqizweni ehlukahlukene ye-elekthronikhi.
Okubizwa ngokuthi inzwa ye-axis eyisishiyagalolunye empeleni iyinhlanganisela yezinzwa ezintathu: inzwa ye-3-axis acceleration, i-3-axis gyroscope, ne-3-axis electronic compass (inzwa ye-geomagnetic).Izingxenye ezintathu zinemisebenzi ehlukene futhi ziyasebenzisana.Ziyizingxenye ezisetshenziswa kakhulu zokuzwa ukunyakaza kanye nokulandela umkhondo emikhiqizweni ye-elekthronikhi njengama-drones, izinto ezibonwayo, omakhalekhukhwini, amakhompyutha wethebhulethi, nama-consoles wegeyimu.Zisetshenziswa ekulawuleni okusebenzisanayo kumasoftware ahlukahlukene nemidlalo.
I-accelerometer ye-axis emithathu, i-gyroscope ye-axis emithathu, i-magnetometer ye-axis emithathu, okuhlanganisa ne-chip sensing chip.Ihlanganisa i-gyroscope yama-axis amathathu kanye ne-accelerator yama-axis amathathu ku-silicon chip eyodwa, futhi ihlanganisa iphrosesa enyakazayo yedijithali, engenza izibalo eziyinkimbinkimbi zokuhlanganisa ingxenye yenzwa eyisishiyagalolunye.
I-accelerometer ye-axis emithathu
Inzwa yokusheshisa ikala ukusheshisa kuzo zonke izinhlangothi emkhathini.Isebenzisa inertia ye "gravity block".Lapho inzwa ihamba, "ibhulokhi ye-gravity" izokhiqiza ingcindezi ku-X, Y, no-Z izikhombisi-ndlela (ngaphambili, emuva, kwesokunxele, kwesokudla, phezulu naphansi), bese isebenzisa ikristalu ye-piezoelectric ukuguqula le ngcindezi ibe yi-electric. isignali, ngokushintsha kokunyakaza, ukucindezela ohlangothini ngalunye kuhlukile, futhi isignali kagesi nayo iyashintsha, ukuze wahlulele isiqondiso sokusheshisa kanye nesivinini sefoni ephathekayo.Isibonelo, uma uphushela ifoni phambili kungazelelwe, inzwa iyazi ukuthi usheshisa ukuya phambili.
I-gyroscope ye-Three-axis: Kala ngesikhathi esifanayo indawo, umzila wokunyakaza kanye nokusheshisa ngezikhombisi-ndlela ezingu-6.I-single-eksisi ingakwazi ukukala inani endaweni eyodwa kuphela, okungukuthi, isistimu idinga ama-gyroscopes amathathu, futhi enye ye-axis emithathu ingangena esikhundleni se-axis eyodwa emithathu.I-3-axis incane ngosayizi, ilula ngesisindo, ilula ngesakhiwo futhi inhle ngokwethembeka, okuwumkhuba wokuthuthukiswa kwama-laser gyroscopes.
I-gyroscope iyinsimbi eyenziwe nge-gyroscope.Isici se-gyro ukuthi izinzile kakhulu lapho ijikeleza, futhi i-axis yayo yokujikeleza akulula ukushintsha isiqondiso.Ngokusebenzisa lesi sici, kukhiqizwa i-gyroscope, esetshenziswa kabanzi.Ngokwesibonelo, ama-gyroscopes angasetshenziswa ukuze uqondise izindiza, amarokhethi nemikhumbi.
Lokhu okubizwa nge-three-eksisi kubhekisela ezinhlangothini ezintathu zobude, ububanzi nobude esikhaleni.I-gyroscope ifakwe eshalofini elingaphambuka ngokuthanda ngezindlela ezintathu, ngakho-ke ngeke lithinteke isimo sengqondo sokundiza sendiza, rocket, njll.
Inzwa ye-gyro ye-three-axis ifakwe kumakhalekhukhwini noma ku-scope, futhi ukuzinza kwayo kungasetshenziswa ukwenza ukudubula kuzinze.Isibonelo, iphinda isetshenziswe kakhulu kweminye imidlalo, efana nemidlalo yokudubula yomuntu wokuqala, imidlalo ye-bowling edinga ukulingisa isenzo, nemidlalo yokujaha yomuntu wokuqala.Linda.
I-accelerator yamasonto amathathu ibhekisela ekusheshisweni kwe-eksisi emithathu ka-x, y, no-z, okuyindawo evame ukusetshenziswa yama-eksisi amathathu.Idluliselwa ngesilawuli esikhulu ngokuhamba kwama-counterweights amaningana kanye nezinhlelo zabo zokuhlanganisa.
Inzwa idinga ukusebenzisana nohlelo lwe-algorithm
Njengemojula yenzwa edidiyelwe, inzwa ye-axis eyisishiyagalolunye inciphisa ibhodi lesifunda kanye nesikhala sisonke, futhi ifaneleka kakhulu ukusetshenziswa kumishini kagesi engasindi kanye nephathwayo, njengezinto ezibonwayo, amakhamera e-drone, namanye amadivaysi agqokekayo.Ngaphezu kokunemba kwedivayisi ngokwayo, ukunemba kwedatha yenzwa edidiyelwe kuhlanganisa nokulungiswa ngemva kokushisela nokuhlanganisa, kanye nama-algorithms afanayo wezinhlelo zokusebenza ezahlukene.Ama-algorithms afanelekile angahlanganisa idatha evela kuzinzwa eziningi, enze ukuntuleka kwenzwa eyodwa ekubaleni indawo enembile nomumo, okuvumela ukutholwa kokunyakaza okunembayo nokuthuthukisa ukunemba kokudubula.
Isikhathi sokuthumela: Apr-20-2022